Abdiqani – GEELLE MAG
Wiil naafo ah oo jaamacad dhameeyay kuna hamminaayo in uu u adeego bulshada
Abdiqani Posted On September 4, 2019
Mowlid Cali Dugow, waa 25 jir naafo ah todobaadkii tagay ayuu ka aflaxay jaamacadda Jaamacadda Caalamiga ah ee Soomaaliya (SIU) waxa uu doonayaa in uu beddelo dunida waxna ku soo kordhiyo. Da’yarkan aragtida wanaagsan waxa uu ka soo jeedaa Degmada […]
Sawirro:-Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Isku Keenay Beelo Saddex Sano Dagaalamayay
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay odayaal iyo wax-garad ka socda deegaannada Huurshe iyo Xeraale oo muda sedax sano ah ay u dhexeysay colaad dhiig badan uu ku daatay. Kulanka […]
Bangiga adduunka iyo madaxtooyada Soomaaliya oo ka wada-hadlay dhibatooyinka biyo yaraanta iyo fatahaadaha wabiyada
Agaasimaha Madaxtooyada Qaranka Dr.Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) ayaa kala hadlay Madax ka socotay Bangiga Adduunka xal u helista dhibatooyinka biyo yaraanta iyo fatahaadaha wabiyada Shabeelle iyo Jubba ee mara dalkeenna. Agaasimaha ayaa tilmaamay in wabiyadan ay muhiim u yihiin nolasha […]
Shirka dib-u- heshiisiinta Galmudug oo dib u dhacay
Shirka dib-u- heshiisiinta Galmudug ayaa dib u dhacay, sababo lagu sheegay arrimo farsamo. Guddiga shirka diyaarinaya ayaa sheegay qorshihii hore ee ahaa inuu maanta shirka furmo inuu dib ugu dhacay Khamiista berri ah,sida ay ku warrantay warbaahinta dowladda. Magaalada Dhuusamareeb […]
Duufaan Xoogan Oo Ku Wajahan Gobol Ku Yaalla Mareykanka
Duufaanta Dorian ayaa u muuqata mid gaabis ku socota ilaa iyo hadda, xilli ay ku wajahantay xeebaha gobolka Florida. Hase yeeshee, khubarrada ayaa ka digaya in taasi ay macnaheedu tahay in dadka ku nool Florida iyo gobollada ku dherersan xeebaha […]
Ardey lagu soo dhaweeyay Jaamacadda UPEACE oo hoostagta Qarramada Midoobey
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay dufcadii 3aad ilaa 200 Ardey cusub oo ku biirtay Jaamcadda UPEACE oo hoostagta Qarramada Midoobey. Barnaamijkan ayaa loogu talo galay iney ka faa’ideystaan ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad […]
Taliska Ciidanka Dab-damiska Somaliland oo rusqeeyey lix askari
Abdiqani Posted On September 3, 2019
Taliska Ciidanka Dab-demiska ee Somaliland ayaa rusqeeyey lix ka mid ah ciidankaasi ka dib markii lagu eedeeyey inay cuneen Jaad. Ciiidanka Dab-damiska waxay ka ruqseeyay Xubinimadii & Masuuliyadii ay Ciidanka Dabdemiska u hayeen Lix xubnood oo ka tirsan Xarunta Ciidanka […]
Ganacsato dibadbax ka dhigay magaalada Laascaanood
Isu soo bax ay soo qabanqaabiyeen ganacsatada yaryar ee ku ganacsaday neheradaha ku taxan laamiga dheer ee magaalada Laascaanood. Isu soo baxan ayaa waxa keenay kaddib markii qorshe ay wada fulinayaan Wasaaradda hawlaha Guud iyo dawlada Hoose oo lagu banaynayo […]
Kenya oo dalbatay in Cabdi Qawi laga saaro dhageysiga kiiska Badda
-Dowladda Kenya ayaa dalbatay in dhageysiga wajiga labaad ee dacwada Badda laga saaro Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah shaqsi asakiisu Soomaali yahay. Maxkamadda waxaa dacwadan u gudbiyay Gudoomiyaha Madasha Pan Africa David Matsanga waxaana uu doonaya in uu muujiyo in […]
Kheyre oo la kulmay ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan Al-shabaab
Abdiqani Posted On August 28, 2019
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre oo uu wehliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka, Sarreeye guuto, Odawaa Yuusuf Raage, ayaa xerada tababarka ciidamada ee Gen. Goordan ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo tababarayo ka […]